လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို ရဲဝံ့စွာနဲ့ပါ၀င်နေရုံ သာမကပြည်သူတွေအတွက် ထောပတ်ထမင်းနဲ့ကြက်သားဟင်းပါချက်ပြုတ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး - Myanmarload
လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို ရဲဝံ့စွာနဲ့ပါ၀င်နေရုံ သာမကပြည်သူတွေအတွက် ထောပတ်ထမင်းနဲ့ကြက်သားဟင်းပါချက်ပြုတ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး
လွန်ခဲ့သော ၁၅ နေ့ က 12:29 February 21, 2021
လတ်တလောမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါ၀င်ကာ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာဆိုရင် အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်း တက်ကြွစွာပါ၀င်လှုပ်ရှားနေကြသလို ဖွေးဖွေးတစ်ယောက်လည်း စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ ပါ၀င်လှုပ်ရှားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်......။
ဖွေးဖွေးဟာ မကြာသေးမီကလည်း သူမရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ "ဦးလူမင်း ပါသွားပါပြီ...​ဖွေးတို့လဲအချိန်မ​ရွေး ပါနိုင်ပါတယ်..
​ဘယ်သူလာဖမ်းဖမ်း CDM ဆက်လုပ်ကြပါ !
တကယ် ထိ​ရောက်ပါတယ် ရုံးမတက်ကြပါနဲ့​တော့ !!!!​အသက်​ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ လူငယ်​လေး​တွေ လူ​ကြီးတွေ အတွက်လဲ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ မျက်ရည်ကျရတယ် ... ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီတခါ အမှန်တရား ကို အမှားတရားက နိုင်လို့မရဘူး...စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးပါ​စေ!!!
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်နိုင် နိုးထနိုင်တဲ့ ​ခေါင်း​ဆောင်​ကောင်း​တွေ လက်ထဲ အမြန်ပြန်​ရောက်ပါ​စေ! ​ကြောက်​ခေတ်ကိုပြန်မသွား​ကြေး! ယ​နေ့ အလှူ ​ထောပတ်ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်း ၁၄၄ ပွဲ! I hope that People don’t react and can get some help from international..Once people react with violence, military can announce the detainment and will Get worse...အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်!!!!!!​အကြမ်းမဖက် ဆန္ဒ ဆက်ပြမယ့် လူများ, CDM ဝန်ထမ်းများကို​လေးစားလျက် ....​ဖွေး​ဖွေး" ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ ကဲ.....ပရိသတ်‌ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Page generated in 0.1309 seconds with5database query and6memcached query.